Gurmad loo samaynayo abaaraha Puntland - BBC News Somali
Gurmad loo samaynayo abaaraha Puntland
Guddiga gurmadka abaaraha ka jira gobolada Puntland ayaa sheegay in haddii sida xaaladdu u xun tahay ay ku sii socoto oo aan roobab la helin dhowrka todobaad ee soo socda, meelaha qaar aysan jiri doonin xoolo la dhaqdo.
Sheikh Fu'aad Mohamuud Xaaji Nuur oo isaga iyo xubnaha gurmadka abaarta ay soo mareen meelaha ugu sii daran xaaladda abaarta aadka u ba'an tahay ayaa markii uu maanta ku noqday magaalada Bossaaso u waramay BBC.
Maqal Oday 30 sano cunayay qaadka oo u joojiyay dhibaatooyin uu ka dhaxlay awgood
Oday 30 sano cunayay qaadka oo u joojiyay dhibaatooyin uu ka dhaxlay awgood
Maqal Xulka kubadda cagta 17-jirrada Soomaaliya oo u soo gudbay nus dhammaadka koobka CECAFA
Xulka kubadda cagta 17-jirrada Soomaaliya oo u soo gudbay nus dhammaadka koobka CECAFA
Maqal Maxay salka ku hayaan dibadbaxyada ka soconaya waddanka Koonfur Afrika?
Maxay salka ku hayaan dibadbaxyada ka soconaya waddanka Koonfur Afrika?
Maqal Daadad saameeyay isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka Mandera
Daadad saameeyay isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka Mandera
Maqal Daadadkii Gaarisa ku dhuftay oo khasaare lixaad leh gaarsiiyay ganacsigii magaalada
Daadadkii Gaarisa ku dhuftay oo khasaare lixaad leh gaarsiiyay ganacsigii magaalada